ပုဂံနဲ့ ပုပ္ပားဇာတ်လိုက်များ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ပုဂံနဲ့ ပုပ္ပားဇာတ်လိုက်များ	Posted by mm thinker on August 2, 2008
Posted in: Art, Sharing.	Tagged: Art, Drawing.	Leaveacomment
ကျနော် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းက စာအုပ်တစ်အုပ်မှာတွေ့တော့ အသက်ပါလွန်းတာနဲ့ ကြိုက်လို့ ကူးဆွဲထားတဲ့ ပုံပါ။ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ ညောင်ဦးဖီး၊ ငထွေရူး၊ ကိုဗျတ္တနဲ့ မယ်ဝဏ္ဏတို့ရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံတွေပါ။ နောင် ပုဂံအကြောင်း၊ ပုပ္ပားအကြောင်းဖတ်တဲ့၊ သီချင်းနားထောင်တဲ့ အခါ ဒီမျက်နှာလေးတွေ မြင်ယောင်လိုက်ပေါ့။ အနုပညာအာရုံကျတဲ့ အခါ ကတ္ထူပုံး၊ နံရံ၊ တံခါးချပ်ပါမကျန် တွေ့ကရာဆွဲတတ်တဲ့ ကျနော်ရဲ့ အကျင့်အတိုင်း အခုလည်း စာရေးစက္ကူတစ်ခုအပေါ်မှာ ကောက်ပြီး ကူးဆွဲထားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
← သင်ကာ့ လက်ရေး	ကယားနှင့် ကရင်နီ အခေါ်အဝေါ် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...